China Die kukanda zvikamu Mugadziri uye Mutengesi | Mestech
Kufa kukanda zvikamu zvakagadzirwa ne zinc, mhangura, aluminium, magnesium, lead, tini uye lead tini alloys uye awo alloys, ayo anonyungudika pakakwirira tembiricha uye jekiseni muforoma mhango uye ndokutonhora pasi pekumanikidzwa
Simbi yekufa ichikanda chikamuimhando yekumanikidza kukanda zvikamu. Imhando yekumanikidza vachikanda muchina kufa-vachikanda muchina vakapakata vachikanda vanofa. Iyo inoshandisa simbi senge mhangura, zinc, aluminium kana aluminium alloy inopisa kuti ive mvura nyika kudururira muchiteshi chekudyisa chemuchina wekufa-uchikanda. Mushure mekufa-kukanda nemuchina wekufa-uchikanda, inogona kukanda mhangura, zinc, aruminiyamu zvikamu kana aluminium alloy zvikamu zvine hushoma chimiro uye saizi yefa. Zvikamu zvakadaro zvinowanzozonzi kufa-kukanda zvikamu. Kufa kukanda kune mazita akasiyana munzvimbo dzakasiyana, senge kufa-kukanda zvikamu, kumanikidza kukanda, kufa-kukanda zvikamu, kufa-kurasa aruminiyamu, kufa-kurasa zinc, kufa-kurasa mhangura, mhangura kufa kufa-kukanda, zinc kufa-kukanda, aluminium kufa-kukanda aruminiyamu kufa-kukanda, aruminiyamu kufa-kukanda chiwanikwa, aruminiyamu chiwanikwa kufa-kukanda zvikamu, nezvimwewo.
Zvakanakira simbi ikafa ichikanda zvikamu:
(1) Kurongeka kwakanaka kwekutenderera (zvinoenderana nezvinhu zvekukanda, asi yekutanga 2.5cm (0.004 inch yekutanga 1 inch) inowanzoita 0.1mm, 0.02mm kwese kuwedzera 1cm (0.002 inch kune yega 1 inchi kuwedzera).
(2) Smooth yakakanda pamusoro (RA 1 - 2.5 microns kana 0.04 - 0.10 microns). Matete matete anogona kukandwa achienzaniswa nejecha uye nekukanda zvachose (ingangoita 0.75 mm kana 0.030 mu). Kuisa kunogona kukandirwa mukati (semuenzaniso zvakapetwa zvakaiswa mukati, kudziyisa zvinhu uye yakasimba-inotakura nzvimbo). Deredza kana kubvisa yechipiri machining mashandiro. Kurumidza kugadzirwa kumhanya. Iyo yekukanda yakasimba tensile inosvika 415 MPa (60 Ksi).
Kuipira simbi kufa kukanda
(1) Mutengo wemari wakanyanya kwazvo. Zvichienzaniswa nedzimwe nzira dzekukanda, inodiwa michina yekurasa, mafuru uye zvikamu zvine hukama zvinodhura kwazvo. Naizvozvo, kuti ugadzire kufa uchikanda maitiro ehupfumi, huwandu hukuru hwekugadzirwa hunodiwa.
(2) Yezvekuyerera simbi chete, iyo yekukanda huremu inofanira kunge iri pakati pe30 g (1 oz) uye 10 kg (20 lb).
(3) Mune yakajairwa kufa kukanda maitiro, pachave paine mashoma pores mune yekupedzisira kukanda. Izvi zvinogona kudzivirira kurapwa kwekupisa kana kupisa, nekuti kupisa kunokonzeresa kuwedzera kwegesi mune iyo pores, iyo inokonzeresa kutsemuka kudiki uye peeling pevhu muzvikamu, saka kukanganisa kwakabatana kwekufa kukanda ndeyekuti zvinongoshanda chete kune zvikamu zvine hunyoro hunogamuchirwa. Zvikamu zvinoda kuomesa (nekuomesa kana kesi kuomesa) uye tempering hazvina kukandwa muforoma.
Kushandiswa simbi ikafa Kudzingwa zvikamu:
Nekuda kwekunakira kwesimbi kufa zvikamu zvekukanda, zvave zvichishandiswa zvakanyanya, kunyanya mukugadzirwa kwemazhinji evasiri-ferrous alloy castings. Mukugadzirwa kwekufa-kukanda, aluminium alloy die-casting account yeiyo yakakura chikamu, kuverenga 30% - 50%; zinc alloy kufa-kukanda ndeyechipiri; mhangura alloy kufa-kukanda maakaunzi e1% - 2%. Anonyanya kushandiswa kufa zvikamu zvekukanda mota uye kugadzira tarakita, zvichiteverwa nechiridzwa kugadzira uye zvemagetsi indasitiri indasitiri, uye zvekurima michini, nyika yekudzivirira indasitiri, komputa, zvekurapa zvekushandisa uye mamwe maindasitiri ekugadzira. Izvo zvikamu zvinogadzirwa nefa kufa yekukanda nzira inosanganisira injini cylinder block, cylinder kavha, gearbox bhokisi, injini chivharo, goko uye bracket yechiridzwa nekamera, pombi yakabatana, giya, nezvimwe.
ypical simbi kufa kukanda zvikamu zvinoshandiswa:
Aluminium kufa kukanda mota dzimba
Industrial aluminium kufa kukanda chikamu
Auto aruminiyamu ikafa ichikanda dzimba
Zingi kufa kukanda base
Nemazvo zingi kufa vachikanda wachi yekugara
Kufa uchikanda kamera yemagetsi imba
Magnesium alloy die casting kesi / chivharo
Kufa uchikanda mwenje zvikamu
Die-vachikanda vharafu & pombi muviri
Kufa-kukanda kushongedza zvikamu
Kufa uchikanda zvikamu zvemhangura
Simbi yekufa ichikanda zvikamu zvinogona kugadzirwa sekufa-kukanda mota zvikamu, kufa-kukanda mota injini pombi fittings, kufa-kukanda mhepo yekugadzirisa zvikamu, kufa-kukanda peturu injini humburumbira musoro, kufa-kukanda vharuvhu rocker ruoko, kufa-kukanda vharafu rutsigiro, kufa-kukanda magetsi zvikamu, kufa-kukanda mota kumagumo chifukidziro, kufa-kukanda goko, kufa-kukanda pombi goko, kufa-kukanda zvikamu zvekuvaka, kufa-kukanda kushongedza zvikamu, kufa-kukanda mavharuvhu zvikamu, kufa-kurasa vhiri uye zvimwe zvikamu. Neyekugadzira epamba Nekuvandudza kweiyo indasitiri yemidziyo, iyo nhanho yemidziyo yemuchina wekufa wekukanda yakagadziridzwa zvakanyanya, mhando dzezvikamu zvinogona kugadzirwa zvakawedzerwa, uye iko iko iko iko, kuomarara uye kuenzana kwezvikamu zvinogona kuve kufa kukanda kwakagadziridzwawo zvakanyanya.
Simbi yekufa ichikanda zvikamu ichiri kushandiswa zvakanyanya muindasitiri, kubhururuka, mota, ngarava, zvemagetsi, zvemagetsi nemamwe maindasitiri nekuda kwezvakanaka zvadzo. Kana chigadzirwa chako chichida kushandiswa, tapota taura nesu. We achakupa pamwe kugadzirwa uye basa simbi ikafa Kudzingwa zvikamu nomwoyo wose.
Pashure: Kufa kukanda maitiro
Zvadaro: Cnc machine
Die Kukanda Mould Zvikamu